ပါမောက္ခယုဝမ်ယူနန်တက္ကသိုလ်သုတေသနအဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအတွက်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျုမှာ Cordyceps Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုစစ်တမ်းနှင့်သုတေသနသင်တန်း | မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဓာတ်ခွဲခန်း
ပါမောက္ခယုဝမ်ယူနန်တက္ကသိုလ်သုတေသနအဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံအတွက်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျုမှာ Cordyceps Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုစစ်တမ်းနှင့်သုတေသနသင်တန်း
Cordyceps ပြတိုက် 2019-07-05 09:45
ပုံ 1. ချင်းရိုင်, ထိုင်းခွန် Tan ကခရိုင်စစ်တမ်း Cordyceps စုဆောင်း
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျုမှာဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုနိုင်ငံတကာပူးတွဲသုတေသနစင်တာအရှေ့တောင်အာရှ Cordyceps ရေရှည်တည်တံ့အသုံးပြုမှု, ပါမောက္ခဝမ်ယုနှင့်ဝမ်ဒေါင်ပါရဂူကျောင်းသားများကို - 2019 ခုနှစ်, မေလ 29 ရက်မှ Nian မေလ 22, နည်းပညာ၏တော်ဝင်ထိုင်းအင်စတီကျု, ယူနန်တက္ကသိုလ်, တရုတ် (ယူနန်) ရန်ဖိတ်ခေါ်သင့်သည် ပညာရေးဆိုင်ရာအလည်အပတ်ခရီး။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တော်ဝင်ထိုင်းအင်စတီကျု (Rajamangala တက္ကသိုလ်မှနည်းပညာတက္ကသိုလ် Thanyaburi) တရုတ် (ယူနန်) ဖြစ်ပါသည် - နိုင်ငံတကာပူးတွဲသုတေသနစင်တာမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးယူနစ်များ၏တဦးတည်းအတွက်ဇီဝအရင်းအမြစ်များအရှေ့တောင်အာရှ Cordyceps ရေရှည်တည်တံ့အသုံးပြုမှု, ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆေးပညာသုတေသီတော်ဝင်ထိုင်းထိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်း Cordyceps ၏စစ်တမ်းများကောက်ယူဖြစ်ပါသည် , စုဆောင်းခြင်း, ပြင်ဆင်မှုနမူနာ, သမဝါယမဆက်ဆံရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းမယ့်ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး Cordyceps ချင်းရိုင်, ဇီဝအရင်းအမြစ်များသုတေသနအပေါ်ထိုင်းထိုင်း Cordyceps နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျု၏ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, အထီးကျန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြားအကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး strains ။
ထိုင်းအပူပိုင်းဒေသမှာတည်ရှိသောအရှေ့တောင်အာရှ, ၏ဗဟိုသည်အများဆုံးဒေသများ, 24 ~ 30 ရက်℃၏ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အပူချိန်နှင့်အတူမနည်း℃ 18 ထက်၏တစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူချိန်အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတုရှိသည်, အကြောင်းကို 1000 မီလီမီတာ၏ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်မိုးရေချိန်တစ်ဦးချမ်းသာမတူညီရှိပါတယ်, ဗဟိုအင်ဒိုချိုင်းနားတွင်တည်ရှိသည် အသီးအရွက်များနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားမျိုးစိတ်များ။ ၎င်း၏ထူးခြားသောပထဝီတည်နေရာ, ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်အလွန်ကြွယ်ဝသောသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များရန်ထိုင်းဇီဝမျိုးကွဲဟော့စပေါ့တဦးဖြစ်လာပါစေ။ ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောင့်ဇီဝအရင်းအမြစ်များ, တရုတ်ခူမှို, ထိုကဲ့သို့သော Jaent ဂျနီဖာ Luangsa-ARD အဖြစ်ကမ္ဘာတွင်ကျော်ကြားပညာရှင်များ, Nigel Hywel-ဂျုံးစ်နှင့်တရုတ်ခူမှိုအရင်းအမြစ်များကိုထိုင်းအများကြီးပြုသောအမှုသည်အခြားသုတေသနအချို့ကြွယ်ဝဖြစ်ပါသည်, လေ့လာမှုများ Cordyceps ထိုင်းမှိုကြောင်းပြသကြ ငွေရတတ်သောသူနှင့်မတူညီအရင်းအမြစ်များ, အပူပိုင်းခူမှို၏မတူကွဲပြားမှုများ၏စင်တာများတဦး, ထိုင်းပြည့်စုံခြင်းနှင့် In-depth မဟုတ်ပါဘူးဇီဝအရင်းအမြစ်များအပေါ်နေ့စွဲသုတေသန Cordyceps ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ထိုင်းနိုင်ငံ, Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များအပေါ်သုတေသနပြုရန်ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုထိုင်း Cordyceps ၏နောက်ထပ် In-depth ကိုဥာဏ်အထောက်အကူဖြစ်တယ်, တရုတ်ခူမှိုထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဇီဝအရင်းအမြစ်များရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်, ကထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုရှိပါတယ်။
ထိုင်းထိုင်းမှာရှိတဲ့နည်းပညာတက္ကသိုလ်တော်ဝင်အင်စတီကျုမှာပြည့်စုံသောအများပြည်သူအဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်တက္ကသိုလ်ပညာသင်နှစ်သုတေသန၏ dual-function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်လ 11, 2018, RMIT University ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဒေါက်တာ Prasert Pinpathomrat ထိုင်းမိုဃ်းတိမ်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ယူနန်တက္ကသိုလ်ဓာတ်ခွဲခန်းသွားရောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားဦးဆောင်နှင့်ယူနန်တက္ကသိုလ်တည်ဆောက်မယ့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလက်မှတ်ရေးထိုး, "တရုတ် (ယူနန်) - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးတွဲသုတေသန Cordyceps အရှေ့တောင်အာရှတွင်ဇီဝအရင်းအမြစ်များရေရှည်တည်တံ့အသုံးပြုမှု သဘောတူညီချက် "ဗဟိုပြု။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျု၏ပညာရေးဆိုင်ရာခရီးစဉ်အတွင်းဆေးပညာသုတေသီတော်ဝင်ထိုင်းထိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်း, Cordyceps စုံစမ်းစစ်ဆေးကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း, ပြင်ဆင်မှုနမူနာ, အထီးကျန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြားအကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး strains နှင့်ချင်းရိုင်ဧရိယာ၌ Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုစစ်တမ်းကောက်ယူ, တိကျတဲ့ အောက်ပါအတိုင်း:
ထိုင်း Cordyceps သုတေသနလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအတွက်နည်းပညာပထမဦးစွာတော်ဝင်အင်စတီကျု
8:30 မှာမေလ 23 နံနက်ပေါ်, ယူနန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခယုဟောင်ကောင် Cordyceps သုတေသနအဖွဲ့ကဝန်ထမ်း၏အဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုထိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်ဒေါက်တာ Laliata Siriwattananon သမ္မတဒေါက်တာ Preeyanat Hongthong ဒေါက်တာ Pacharathon Simking, Surachai Techaoei တက်ရောက်ရန်ထိုင်းနိုင်ငံ, နည်းပညာတက္ကသိုလ်တော်ဝင်အင်စတီကျုမှာနွေးထွေးစွာကြိုဆိုလက်ခံရရှိ ဒေါက်တာ Panart Thongpoem ဒေါက်တာ Phraomas Charoenrak ဒေါက်တာမာစတာ Khemjira Jarmkom, rosarin မာစတာ Taksin, မာစတာ Thisakorn Dumrongphuttidecha, မာစတာ Oam Sthityanak, မာစတာ Sinsamut SaeNgow, သခင်၏နှင့်အခြား Narakamon Khamwaree ။ ထိုင်းဆေးကြောငျးဌာနမှူးဒေါက်တာ Laliata Siriwattananon ကြိုဆိုသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်တက္ကသိုလ် (ယူနန်) ထုတ်ပြန်ကြေညာ - ဆေးပညာသုတေသီတွေကထိုင်းထိုင်း Cordyceps စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, စုဆောင်းခြင်း, နမူနာပြင်ဆင်မှု၏နည်းပညာကျောင်းရဲ့တော်ဝင်အင်စတီကျု၏နိုင်ငံတကာပူးတွဲသုတေသနစင်တာဇီဝအရင်းအမြစ်များအရှေ့တောင်အာရှ Cordyceps ရေရှည်တည်တံ့အသုံးပြုမှု , အထီးကျန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြားအကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုဖွင့်လှစ် strains ။
ထိုင်းထိုင်းဒေါက်တာ Laliata Siriwattananon ကြိုဆိုပွဲမှတ်ချက်တွေအတွက်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျု၏ဆေးပညာ၏ပုံ 2. ဒင်း
00-12: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တရုတ်ခူမှိုကျော် 600 မျိုး, မိုဃ်းတိမ်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ဓာတ်ခွဲခန်းမိတ်ဆက် "ဤလောက-စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောမျိုးစိတ်များအတွက် Cordyceps မျိုးစိတ်" အမည်ရှိ 00 အစီရင်ခံစာ, ပါမောက္ခယုဝမ်, 23း9 မှာမေ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်သုတေသန၏ 20 နှစ်ကြာကျနော်တို့ 8500 ထက် strain ငွေထက်ပို 18000 နမူနာပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြား Cordyceps မျိုးစိတ်ထက်ပိုမို 450 မျိုးကိုကောက်ယူပါပွီ။ ပါမောက္ခယုဝမ်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျုအဘို့စကားပြော, ထိုင်းဇီဝသယံဇာတကြွယ်ဝသောကြောင်းဆေးဖက်ဝင်တန်ဖိုးကတရုတ်ခူမှို, Cordyceps 350 ကျော်မျိုးစိတ်သည်မိုဃ်းတိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် Cordyceps ဓာတ်ခွဲခန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်သုတေသနအလုပ်မိတ်ဆက်နဲ့အထူးတင်ပြချက်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအရအရေးကြီးသောမျိုးစိတ်များ Cordyceps စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, သုတေသနအရှေ့တောင်အာရှ၏လူများ၏အကျိုးအတွက်ဇီဝဆေးဝါးကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကူညီဖို့ပိုပြီးအရင်းအမြစ်တွေကိုစုစည်း Cordyceps ။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်တော်ဝင်အင်စတီကျုမှာပုံ 3. ပါမောက္ခယုဝမ်ပညာသင်နှစ်အစီရင်ခံစာ
00-15: 00, အစီရင်ခံစာတရုတ်ခူမှို, မျိုးစိတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း, တရုတ်ခူမှိုအိမ်ရှင်အမျိုးအစားများ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ဖြူးဖော်ပြထားတယ် "စီးပွားရေးအရအရေးကြီးသော cordycipitoid မှိုအဆိုပါ Cordyceps မျိုးစိတ်-ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကဘယ်လို" ခေါင်းစဉ်ပါမောက္ခယုဝမ်, 23 နေ့လည်ခင်း 13 May Cordyceps စုဆောင်းခြင်း, Cordyceps မျိုးစိတ်အထီးကျန်နှင့်သိုလှောင်ထားခဲ့ကြသည်, ယဉ်ကျေးမှု, မျိုးစိတ် Cordyceps ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်မော်လီကျူး-based စနစ်များနှင့်ဆေးပညာထိုင်းသင်တန်းဆရာ၏တော်ဝင်အင်စတီကျုနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းနှင့်အတူပညာရေးဖလှယ်မှုများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်မှတ်ပုံတင်၏နည်းလမ်းများအပေါ်အာရုံစိုက်။
တော်ဝင်ထိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့် 4. ပါမောက္ခယုဝမ်ပညာသင်နှစ်ဖလှယ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များပုံ
00-17: 15 မှာ 23 နိုင်ပါစေ "senso lato အထီးကျန်မှုတွေနဲ့စိုက်ပျိုး Cordyceps ၏ technique ကို၏နိယာမ" တရုတ်ခူမှိုနမူနာစုဆောင်းမှုအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာခေါင်းစဉ်ဒေါက်တာဝမ်ဒေါင်, ပြင်ဆင်မှု, ဘက်တီးရီးယားအထီးကျန်မှုတွေ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနည်းလမ်းများ 00 နမူနာ Cordyceps ပဏာမဥာဏ်ရှိသည်ဇီဝအရင်းအမြစ်များကို genebank တည်ဆောက်, တရုတ်ခူမှို၏သင်တန်းဆရာထိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာကွင်းဆင်းလေ့လာမှုကြကုန်အံ့။
RMIT University မှပညာရေးဆိုင်ရာဖလှယ်မှုဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာသုတေသီများနှင့်အတူပုံ 6. ပါမောက္ခယုဝမ် Cordyceps သုတေသနအဖွဲ့
ဒုတိယအချက်မှာထိုင်း MEDICAL Cordyceps ကိုပြင်ဆင်ယဉ်ကျေးမှုအလတ်စား, ဘက်တီးရီးယားခွဲထုတ်, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, နည်းပညာဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း
မီဒီယာပြင်ဆင်မှု, Cordyceps မျိုးစိတ်ခွဲခြာ, Cordyceps ယဉ်ကျေးမှုစုစည်းမှု, တရုတ်ခူမှို: May 24, 9: 00-17: အပါအဝင်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျထိုငျးနိုငျငံရှိနည်းပညာ Cordyceps ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းန်ထမ်းများ၏တော်ဝင်အင်စတီကျု၏ 00, ပါမောက္ခယုဝမ် Cordyceps သုတေသနအဖွဲ့, အတုစိုက်ပျိုးမှုနည်းစနစ်။ လေ့ကျင့်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များ၏စစ်ဆင်ရေးကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်သရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုဒေါက်တာဝမ်ဒေါင်, ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီလေ့ကျင့်ခန်းသင်တန်းဆရာ, ပါမောက္ခဒေါက်တာယုဝမ်နှင့်ဝမ်ဒေါင် On-site ကိုလမ်းညွှန်မှု, အခြေခံလိုအပ်ချက်များသည်အထိစစ်ဆင်ရေးအတွင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၏လေ့ကျင့်ရေး။
ပုံ 7. RMIT University မှသုတေသီတွေက Cordyceps ယဉ်ကျေးမှုငွေကောက်ခံစမ်းသပ်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်.
8. RMIT University မှသုတေသီတွေကစမ်းသပ်ကိရိယာများကိုပွငျဆငျပုံ
နည်းပညာတက္ကသိုလ်တော်ဝင်အင်စတီကျု၏ 9. မီဒီယာပြင်ဆင်မှုဓာတ်ခွဲခန်းပုဂ္ဂိုလ်များပုံ
နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပုံ 10. ပါမောက္ခယုဝမ်စမ်းသပ်လည်ပတ်လမ်းညွှန်သုတေသီများတော်ဝင်အင်စတီကျု
တတိယအချက်ချင်းရိုင် Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုလယ်ပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလေ့ကျင့်ရေး
, May 25, ယူနန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခယုဝမ် Cordyceps သုတေသနအဖွဲ့နှင့်တော်ဝင်ထိုင်းထိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဘန်ကောက်မြို့ကနေစတင်လူ 15 ၏ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ကထူထောင်, ချင်းရိုင်၏ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမယ့်ချင်းရိုင်ပြည်နယ်၏ပြည်နယ်မြို့တော်ရောက်ရှိကျော် 700 ကီလိုမီတာမောင်း Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုလယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ မြောက်ပိုင်းနှင့်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနှင့်လာအိုနိုင်ငံအတွက်ချင်းရိုင်အိမ်နီးချင်းဖေဖော်ဝါရီလမှမြင့်မားသောမြေပြင်ပေါ်တွင် 580 မီတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တည်ရှိသောအောက်တိုဘာလများအတွက်ချင်းရိုင်ရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်မေလတွင်ဖို့အေးမြရာသီ, မတ်လနိမ့်ဆုံးအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောဖြစ်ပါသည် စက်တင်ဘာလမှမေလနှောင်းပိုင်းတွင်ဇွန်လအတွက်အထူးသဖြင့်ပူပြင်းတဲ့ပူပြင်းရာသီ, မိုးရာသီဖြစ်ပါသည်, ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အပူချိန် 24.6 ℃ဖြစ်တယ်။
26 --27 ရက်ပေါင်း May, သစ်တောရိုင်ခွန် Tan ကခရိုင် Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့သည် Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုစစ်တမ်းခဲ့ကြသည်, ချင်းရိုင်အဆိုပါမြေပြင်အနေအထား၏အရှေ့ပိုငျးမှာတည်ရှိပါတယ်ခွန် Tan ကခရိုင်, တောင်ကြီး, ချိုင့်ဝှမ်းလွင်ပြင်များနှင့် alluvial လွင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကို 1085 မီတာအမြင့်နမူနာကောပျမ်းမျှနှစ်စဉ်မိုးရေချိန် 1768mm, နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအပူချိန် 24 ℃။ ပဏာမစာရင်းဇယား, 20 နမူနာစုစုပေါင်းအရာများ၏ကြီးစိုး Genera Beauveria Beauveria မိတ္တူ, စုဆောင်း။
ပုံ 11 ချင်းရိုင်, ထိုင်းခွန် Tan ကခရိုင် Cordyceps နေရင်းဒေသများ
12. သ Beauveria အဆိုပါ genus Beauveria SP
Host က: Hymenoptera (ပုရွက်ဆိတ်တွေ, တဦးတည်း); Habitat: အအမြဲစိမ်းကျယ်ပြန့်ရွက်ကိုသစ်တောကြမ်းပြင်အမှိုက်သရိုက်များတွင်မွေးဖွားသို့မဟုတ်
13. သ Cordyceps အဆိုပါ genus Cordyceps SP
Host က: Lepidoptera တဦးတည်းကြင်နာ; Habitat: အမြဲစိမ်းကျယ်ပြန့်ရွက်ကိုသစ်တောမြေပြင်အမှိုက်သရိုက်များအတွက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်မွေးဖွား
ပုံ 14 ချင်းရိုင်, ထိုင်းခွန် Tan ကခရိုင်စစ်တမ်း Cordyceps စုဆောင်း
27 20 နိုင်ပါစေ: 00-24: ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်အသင်းများကို Cordyceps မျိုးကွဲအလုပ်, ဘက်တီးရီးယားနောက်ထပ်အထီးကျန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုနည်းလမ်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တော်ဝင်အင်စတီကျုနည်းပညာသုတေသီများ, ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့သည်လိမ့်မည်နောက်ထပ်အထီးကျန်အထီးကျန်ခဲ့ကြသည် 00 ကောက်ယူ မျိုးကွဲသူတို့ရဲ့ taxonomic status ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
15. သဒေါက်တာဝမ်ဒေါင်စံပြစစ်ဆင်ရေး Cordyceps မျိုးစိတ်ခွဲခြာစမ်းသပ်ချက်
ဖျော်ဖြေပုံ 16 ချင်းရိုင်ခွန် Tan ကဝယ်ယူဇုန်ကွဲကွာမျိုးစိတ် Cordyceps အလုပ်
ဒီခရီးစဉ်ဟာတရုတ် (ယူနန်) မှတဆင့် - လေ့ကျင့်ရေးကတဆင့်, RMIT University မှသုတေသီတွေကထိုင်း Cordyceps စုံစမ်းစစ်ဆေးကျွမ်းကျင်ကြထိုင်းနိုင်ငံအတွက်နည်းပညာတော်ဝင်အင်စတီကျုနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းရန်ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုနိုင်ငံတကာပူးတွဲသုတေသနစင်တာအရှေ့တောင်အာရှ Cordyceps ရေရှည်တည်တံ့အသုံးပြုမှု, ဘက်တီးရီးယားအထီးကျန်နှင့်သိုလှောင်ထားခဲ့ကြသည် အတုစိုက်ပျိုးမှုကျွမ်းကျင်မှု, ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးချင်းရိုင်, ထိုင်း Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထပ်မံဇီဝမတူကွဲပြားမှုအရင်းအမြစ်များလေ့လာမှုနှင့် Cordyceps ထိုင်း၏ရေရှည်တည်တံ့အသုံးပြုရန်သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုများကိုထိုင်းနိုင်ငံ, In-depth Cordyceps ဇီဝအရင်းအမြစ်များကိုစစ်တမ်းနှင့်သုတေသနအလုပ်ဖွံ့ဖြိုးကြလိမ့်မည်။
ပုံ 17 ချင်းရိုင်, ထိုင်း Cordyceps အရင်းအမြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဓာတ်ပုံကို